सेक्सअघि के खानुहुँदैन ?-Nagarikaawaj.com
सेक्सअघि के खानुहुँदैन ?
तपाईंहरुले सेक्सको शक्ति बढाउने खानेकुराहरुको बारेमा त पक्कै सुन्नुभएको छ होला । तर यस्ता खानेकुराहरुपनि छन् जसलाई तपाईंले सेक्सअघि खानुहुँदैन । यिनीहरुले सेक्सको वातावरणनै खराब बनाइदिनसक्छन् ।
गेडागुडी (बिन्स्)– गेडागुडी फाइबर र प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । तर यसमा एक प्रकारको गुलियो तत्व हुन्छ जुन चाँडै पच्दैन र पेटमा ग्याँस पैदा गर्दछ । ग्याँस भएको पेट लिएर सेक्स गर्न कति उचित होला ? आफै बिचार गर्नुहोस् ।
लसुन– लसुनले खानको स्वाद राम्रो बनाएपनि यसलाई सेक्सअघि सकेसम्म नखाए राम्रो हुन्छ । यसले मुख गनाउनेदेखि लिएर पेटमा ग्याँससमेत पैदा गर्न सक्छ । यसको सेक्सको लागि राम्रो वातावरण बनाउँदैन ।
चिज– चिजको बासना पनि लसुन जस्तै कडा हुन्छ । यसले लामो समयसम्म तपाईंको मुख गनाउने हुन्छ । यसले तपाईंको पार्टनरको मुड बिगार्दिन सक्छ । त्यसैले सेक्सअघि चिज पनि नखाए बेस हुन्छ ।
रातो मासु – मासुभन्ने बित्तिकै हामी मध्ये धेरैको मुखमा पानी आउँछ । यो आफ्नो दिन अन्त्य गर्ने सबैभन्दा उत्तम तरिका पनि हुनसक्छ । तर रातो मासु पच्नलाई निकै समय लाग्छ । यसले तपाईंलाई अल्छी र सुताहा बनाउन सक्छ । त्यसैले यसले सेक्सको दौरान तपाईंको प्रस्तुतीमा नकारात्मक असर पुग्न सक्छ ।
फ्रेन्च फ्राई – फ्रेन्च फ्राईमा बोसो हुनेहुँदा यसले टेस्टोस्टेरोनको मात्रा र रगतको संचारलाई घटाउन सक्छ । यसमा नुनको मात्रा पनि धेरै हुँदा उच्च रक्तचाप भएका मानिसहरुलाई लिंग उत्तेजित राख्न गाह्रो पर्न सक्छ ।
पुदिना – पुदिना खाएपछि त झन् स्वासमा भएको दूर्गन्ध हटाएर सेक्समा सहयोग पुग्नुपर्ने होइन र ? तर पुदिनामा पनि टेस्टोस्टेरोनको मात्रा घटाउने तत्व हुने हुँदा यसले सेक्सको दौरान तपाईंको प्रस्तुतीमा नकारात्मक असर पुग्न सक्छ ।